काठमाडौं, २० भदौ । बलात्कारीलाई फाँसीको माग सजाय हुनुपर्ने भन्दै कालो पेटीकोट लगाएर केहि समय अगाडि राजधानीको सडकमा अर्धनग्न प्रदर्शन गर्ने सावित्री सुवेदी ‘सगरमाथाकी छोरी’ले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट हालै प्रदान गरिएको विभुषण्बारे आपति जनाएकी छिन् ।
सामाजिक संजालमार्फत आफ्ना विचारहरु सार्वजनिक गर्दै उनले बलात्कारीलाई जोगाएको आरोपमा कारबाहीमा परेका नेपाल प्रहरीका एसपी विद्यानन्द माझीले मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभूषण पाएकोमा आलोचना गरेकी हुन् ।
माझीले प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाएका थिए ।
अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रहरीले पदक पाउने मेरो देश विचरा हामी ताली बजाउनभन्दा के सक्छौं र भन्दै लेखेकी छन् । सामाजिक संजालमा उनले लेखेकी छन्, ‘विचरा मेरो देश जहाँ अपराधी बचाउनेले नै पदक पाउँछ। निलम्बनमा परेको प्रहरी नै अब्बल देखिन्छ । यस्तै छ यो देशको दुर्दशा, आखिर कहिलेसम्म ? अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रहरीले पदक पाउने मेरो देश । कठै विचरा हामी नेपाली जनता, ताली बजाउन बाहेक अर्को पनि के छ ? अब नेपाली उठ्ने बेला भयो है । बलात्कारीलाई जोगाएको आरोपमा कारबाहीमा परेका नेपाल प्रहरीका एसपी विद्यानन्द माझीले मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभूषण पाएका छन् । उनले प्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्थिक चलखेलका आधारमा बलात्कार गर्ने समूहसँग मिलेर उनले पीडितलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरी उनलाई विभागीय कारबाही गरेको थियो । उनै माझीले राष्ट्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको हातबाट विभूषण ग्रहण गरेका छन्।’